Puri Rath Yatra 2018 Packages | Call: + 91-993.702.7574
Tena mpanaraka marina ny Hindoisma ve ianao? Mitadiava toerana ara-pivavahana misy vidiny amin'ny fiainanao, ampio Puri Rath Yatra 2018 ho an'ny lisitrao! Eny tokoa, Puri Rath Yatra dia zavatra iray tokony hionona farafaharatsiny indray mandeha eo amin'ny fiainana.
Mankalaza ny fetibe lehibe indrindra eto amin'ny planeta Rath Yatra, izay misy ireo andriamanitra mivoaka ny tempoly, manapaka ny sakana amin'ny caste, ny finoana, ary ny herisetra mba handefasana ny hafatra ho an'izao tontolo izao. Ny Puri, ny kalesy goavam-be, ny klioban'ny rivotra miditra amin'ny rivotra tampoka ary ny dinôzôfa tsara dia mahatonga ny fetibe masina indrindra any Inde, Rath Yatra 2018 iray hetsika iray amin'ny karazany.
Ilay malaza malaza Rath Yatra nankalazaina tamin'ny fanenjehana, ny herim-po ara-pinoana ary ny fanahin'ny mpiara-dia. Ny feon'ny kipantsona sy ny amponga ary ny mozika dia mahatsapa fa ny lanitra dia lavo amin'ny tany amin'ny fotoan'ny fahasoavana. Inoana fa raha manintona ireo kalesy ianao indray mandeha dia hahazo ny lalanao mankany an-danitra ianao. Ary, tsy misy olona eto an-tany maniry ny tsy hitia Puri Rath Yatra 2018!
SandPebbles manolotra fanafody mahavariana Puri Rath Yatra Tour, mba hahafahanao mivezivezy malalaka sy trano fialan-tsasatra mandritra ny ora tena mandany indrindra ao an-tanàna. Na te handeha lavitra avy ao Bhubaneswar na mijanona ao an-tanàna mandritra ny Puri Rath Yatra izahay, dia manao ny fandaharana rehetra avy amin'ny hotely fisakafoana mba handeha, fitsangatsanganana, ary ny rehetra, mba hahalalanao ny dianao masina tsy hay hadinoina. ny Puri Rath Yatra 2018 dia ahitana ny fonosana:
Andro 1: Tonga ny Bhubaneswar
Ny solontenan'ny solontenanay dia handray anareo any amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Biju Patnaik, Bhubaneswar ary mitondra anareo any amin'ny hotely. Raha tonga ny maraina dia afaka mitsidika ny Smart City ianao na afaka mandeha ho any Puri, 60 Km avy ao an-tanàna fotsiny. Hisy servisy ao amin'ny hotely.
Andro 2: Tsidiho ny Tempolin'i Jagannath
Taorian'ny sakafo maraina dia nandeha nankany Puri en-route hitsidika an'i Dhauli (Ashokan Rock Edict sy Shanti Stupa), Pipili (Applique Work Village), Sakshigopal (Radha Krishna Temple) & Raghurajpur / Naikpatna (Village Painting Village). Tonga eto Puri, Mankanesa any amin'ny hotely. Ny fitsidihana hariva any amin'ny Tempolin'i Lord Jagannath mba handray anjara amin'ny Aalati Darshan mivantana (tsy mahazo ny Hindus ao amin'ny tempoly). Tsy mila mitsidika an'i "Char Dham" ianao mba hahatratrarana ny "Moksha" (famonjena), rehefa mitsidika ny Tempolin'i Puri ianao. Miverina any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
Andro 3: Rath Yatra
Taorian'ny sakafo maraina dia mandeha mankany Puri Badadanda. Nisy fandaharana manokana natao teo an-tampon'ny trano fandraisam-bahiny noho ny fijerena an'i Rath Yatra. Raha te-hahita an'i Rath Yatra avy eny ambony tafo mialohan'ny maraina ianao. (Sakafom-pisakafoanana, tavoahangy rano, sakafo am-bifotsy (veg) no homena anao. Ny hariva niverina tany amin'ny hotel dia nisakafo sy natory tory.
Andro 4: Sehatr'asa Puri
Aorian'ny sakafo maraina dia miomàna ho amin'ny fitsidihana. Tsidiho ny Narendra Pokhari, ny Temanan'i Lokanath, ny Tempolin'i Markandeshwar, ny Lakshmi Temple, ny Tempolin'i Ganesh, ny Tempolin'i Gundicha, ny Swargadwar, ny Raghurajpur Artist Village, ny Tempolin'i Bimala & maro hafa. Miverena any amin'ny hotely ary manomàna sakafo sy matory tsara.
Andro 5: Fun Puri Beach
Toerana iray ho an'ny mpivahiny tsy tambo isaina, izay tonga mba handray ny fanadiovana nentim-paharazana. Iray amin'ireo tora-pasika sira tena tsara indrindra any Inde, izay maneho ny hakanton'ny rano ao Bay of Bengal. Afaka mankafy ireo onja mahafinaritra mipetraka eo anoloan'ny moron-dranomasina ianao amin'ny fialamboly gilasy sy zavatra hafa sakafo na mandeha amin'ny fiara lava mankany Puri-Konark Marine Drive.
Andro 6: Fivarotana any Puri
Ny olona dia tsy afaka manadino ireo asa tanana hita manodidina an'i Puri. Tadiavo ny firavaka volafotsy volafotsy sy ny fividianana an'i Sambalpuri sy Bomkai ny tady dia hanome anao ny asa mafy ataony.
Andro 7: Manaraka an'i Konark
Ankoatra ny fanatrehana ny Fetiben'ny Ratra Yatra, ireo mpandeha any Puri dia afaka mitady vintana hafa ho an'ny mpizahatany. Ny Puri Beach, Konark Beach, Tempolin'i Konark Sun dia anisan'ny mpitsidika mpizahatany mahaliana indrindra manerana an'i Puri. Taorian'ny sakafo maraina dia nitsidika ny Tempolin'i Konark Sun, tranokala ASI (Closed on Friday), Tempolin'i Ramchandi & Chandrabhaga Beach. Ny tolakandro dia nafahana tamin'ny torapasika volamena ary miala sasatra eo amin'ny tsenan'ny torapasik'i Puri. Nandritra ny alina tao Puri.
Andro 8: Fialana
Rehefa avy nidina ny sakafo maraina tao amin'ny seranam-piaramanidina Bhubaneswar / Railway amin'ny diany mankany an-dalana.
Aarti Tikka rehefa tonga
Ny famindrana rehetra avy amin'ny fiara AC irery
Puri-Konark Marine Drive fitsidihana (Mipetraka amin'ny fiaramanidina miabo na coaches)
Puri Sightseeing tour + Jagannath Tempoly + Konark (Seat amin'ny fiara malaza na mpitaiza)
Na miresaka momba ireo tempoly ara-tantara, tsangambato, toerana masina, fety, toerana malaza, kolontsaina na sakafo - dia tsy misy dikany ny fahasahiranan'ny fanjakana. Ary, ny kolotsaina Jagannath dia manana zavatra, izay mahatonga ny Indiana rehetra hirehareha.
Tongasoa eto amin'ny tanin'Andriamanitra. Odisha miandry ny fahatongavanao.